Alzeria : Niondrika teo anatrehan’i Etazonia i Alzeria, niverina ny saina · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Mohamed Benderouiche
Voadika ny 30 Desambra 2019 17:25 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 简体中文, 繁體中文, Español, Deutsch, বাংলা, English
(Lahatsoratra jona 2010)
Nahatonga saina ny Alzeriana ihany ny fanantenana sy ny fahadisoam-panantenana fa tsy mahavita hahazoana fandresena amin'ny lalao football raha ny fitiavan-tanindrazana irery ihany. Nanjavona tokoa manko ny fanantenan'ny Alzeriana tamin'ny Alarobia nandritra ny lalao nifanandrinana tamin'ny ekipa Amerikana tao Pretoria. Resin'ny ekipa Amerikana tamin'ny isa 1 sy 0 i Alzeria.
Mazava ho azy fa naneho hevitra momba izany faharesena izany ireo bilaogera Alzeriana, Aberrahmane nanoratra hoe:
Nandritra ity amboara manerantany tao Afrika Atsimo ity, niharan'ny faharesena roa ny Alzeriana ary lalao ady sahala tamin'ny lalao telo. Alzeria no hany ekipa nahavita tsy nahamarika baolina tafiditra tamin'ity amboara manerantany ity.
Noho ny lentam-pahaizana iva dia iva amin'ny baolina kitra ao Alzeria, dia voatery niantso mpilalao any ivelany ny mpanazatra. Noho ireo mpilalao ireo no nahatafiditra an'i Alzeria handray anjara tamin'ny amboara Afrika sy ny amboara manerantany saingy tsy afaka mandeha lavitra.
Tena hentitra, milaza i Le Montagnard fa mivoaka amin'ny amboara Manerantany Afrikanina Atsimo tsy misy voninahitra amin'ny lalao ady sahala sy faharesena roa ny Alzeriana.
Tsy ampy ny zava-bitan'ny ekipa. Ady sahala ihany no vita tamin'ny ekipa Anglisy. Mivoaka anaty fahamenarana ireo mpilalao tahaka an'i Ziani, Djebour. Satria tsy nilalao niaraka tamin'ireo kliobany izy ireo nandritra ny volana maromaro.
Hita ho diso fanantenana, manontany tena amin'ny fandraisan'ny Alzeriana anjara amin'ny Amboara Manerantany i Djalla Namri.
Ny fanontaniana ary dia hoe: Inona no natao tany Afrika Atsimo?
Ny valiny dia: el mouhim el moucharaka (ny fandraisana anjara no zava-dehibe) !!!!
Izany eo ihany, manasonia fifanarahana dokambarotra marobe ary mamela ireo mpanohana an-tapitrisany amin'ny fanazavana mamiratra hoe: tsy manana mpanafika izahay.
Na dia nihintsana aza ny ekipa, dia manome voninahitra ilay mpiandry tsatokazo M’bolhi ny Alzeriana, tahaka izany ity bilaogera Alzeriana , RZ ity:
Tsy azo lavina fa ilay mpiandry tsatokazon'ny Verts, M'bolhi no Alzeriana mendrika indrindra teny an-kianja. Tsy maintsy lazaina fa nanavotra ny ekipantsika tsy hahazo faharesena mavesatra izy, noho ireo fahaizany miditra an-tsehatra sy ireo fanakanana naha-avotra ny vodilaharan'i Alzeria tsy mahahetsika eo anoloan'ireo mpanafika Amerikana. Tsara toerana, fahaiza-mijery ny lalao, fahavononana, fitoniana, ary indrindra fanetren-tena…
Khalid Mimoune miarahaba [en arabe] ilay mpiandry tsatokazo ihany koa :
Miarahaba ny mpiandry tsatokazo Rais M’bolhi izay nampitolagaga ahy tamin'ny lalaony, ny fifantohany sy ny fanoherany manoloana ireo mpanafika nandritra ny lalao roa nifanaovana tamin'ny Amerikana sy ny Anglisy aho.
Mpanora-gazety Ithri Belateche mamintina hoe:
Satria tsy mahaliana antsika intsony ny baolina kitra sy ny amboara manerantany, miverina amin'ny fiainana andavanandro ary hiresaka tsy fananan'asa, fahantrana sy ditran-jatovo, simenitra sy ny Harragas, ny kolikoly sy ny fampihorohoroana, izany hoe ny mahazatra raha fintinina. Saingy amin'izany rehetra izany kosa, aza manipy ny mariky ny firenena any amin'ny fanambanin'ny fampirimana entana.